Vivo Z3X: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida rasmiga ah | Androidsis
Vivo Z3X: Nooca cusub ee bartamaha
Ilaa sanadkaan, Vivo waxay horey nooga tagtay dhowr taleefano. Qaar badan oo ka mid ah moodooyinkani waxay gaareen heer dhexdhexaad ah oo ah nooca Shiinaha, sida Vivo S1 ama X27 iyo X27 Pro. Shirkaddu waxay hadda u soo bandhigeysaa taleefankeeda cusub qaybtan suuqa. Waa Vivo Z3X, oo soo bandhigitaankiisu horeyba uga dhacay Shiinaha si rasmi ah.
In Vivo Z3X this waxaan ka heli qaar ka mid ah astaamaha horeyba ugu badnaa bartamaha dhexe ee Android. Shaashad ballaaran, processor wanaagsan, iyo sidoo kale laba kamarad gadaal ah. Marka waxay buuxineysaa qaar badan oo ka mid ah shuruudaha caadiga ah ee kiiskan.
Waxaan sidoo kale arki karnaa in qaabkani leeyahay qaybo ka mid ah dhinacyada oo leh Vivo Z3, taas oo summaddu si rasmi ah u soo bandhigtay Oktoobartii hore. Xaaladdan oo kale, sumadda Shiinaha ayaa layaab ku noqotay qaabeynta, tan iyo waxay nooga tagayaan qaanuun soo jireen ah, halkii qaab dhibic biyo ah, sidaan wax badan u aragno bilahaan.
1 Tilmaamaha Vivo Z3X
Tilmaamaha Vivo Z3X
Nooca Shiinaha ayaa caadiyan nagaga tagaya moodello wanaagsan bartan-dhexda. Wax mar kale ku cad Vivo Z3X. Waxay leedahay tusaalooyin wanaagsan oo kala duwan. Marka lagu daro la kulanka qaar ka mid ah shuruudaha ay isticmaaleyaashu weydiistaan ​​taleefannada ku dhex jira qaybtan suuqa. Marka waxay ballanqaadeysaa inaadan niyad jabin. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Shaashad: 6,26-inji IPS LCD leh FullHD + qaraar iyo saamiga 19: 9
Kaydinta Gudaha: 64 GB (oo lagu ballaarin karo kaarka micro SD)
Kaamirada gadaal: 13MP + 2MP oo leh iftiin LED ah
Kaamirada hore: 16MP
Batariga: 3.260 mAh
Nidaamka qalliinka: Android 9 Pie oo leh Funtouch OS 9.0 oo ah lakab
Isku xirnaanta: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a / c, LTE, Dual SIM, GPS, GLONASS
Cabirka: 154,81 x 75,03 x 7,89 mm
Sida lagu yiqiin qaybtan maanta, taleefanka ayaa nooga tagaya kamarad gadaal laba-laab ah. Xaaladdan oo kale, isku darka dareemayaasha 13 + 2 MP ayaa loo isticmaalaa. Waxaa awood ku leh AI, sidaa darteed waxaan haynaa qaabab sawir dheeri ah oo guud ahaanna waxqabad wanaagsan ayaa laga filayaa iyaga. Muraayad keli ah ayaa loo adeegsadaa xagga hore, xaaladdan 16 MP. Kaamirad wanaagsan marka ay timaaddo qaadashada sawirrada taleefanka. Dareeraha sawirka faraha ayaa ku yaal kiiskan dhabarka dambe ee Vivo Z3X.
Batariga aaladda wuxuu leeyahay awood dhan 3.260 Mah. Marka lagu daro processor-ka ay heysato, marka lagu daro inuu horey u lahaa Android Pie asal ahaan, oo leh shaqooyin kala duwan oo maareynta batteriga ah, waa inuu na siiyaa madax-bannaanida wanaagsan markasta. Waxaa loo soo bandhigaa sida dhexdhexaad dheellitiran, oo leh naqshad shaqeyneysa qiimo weynna u leh lacagta, taas oo shaki la'aan ah mid ka mid ah xooggeeda. Marka haddii laga bilaabo Yurub, waa tusaale in laga fiirsado qaybtan suuqyada ah.
Waqtigan xaadirka ah, soo bandhigida Vivo Z3X ayaa ka dhacday Shiinaha, taas oo ah suuqa kaliya ee lagu xaqiijiyay in la bilaabay taleefankan. Shirkaddu wali kama aysan hadlin wax ku saabsan bilaabitaankeeda suuqyada kale. In kasta oo la tixgelinayo joogitaanka caalamiga ah ee shirkadda, haddana ma sahlana in laga bilaabo Yurub. Laakiin waxaan kaa sugi doonaa xoogaa xaqiijin rasmi ah.
1da Maajo waxaa suurta gal ah in taleefanka la keydiyo, halka si rasmi ah waxay u bilaabmi doontaa 8-da Maajo. Kuwa xiiseynaya waxay awoodi doonaan inay kala doortaan dhowr midab, sida madow, guduud ama casaan. Waxaan ka helnay hal nooc oo taleefanka ah marka loo eego RAM iyo keydinta, 4/64 GB.
Qiimaheeda bilawga waa 1.198 yuan, taas oo ku saabsan 160 euro in la beddelo. Marka tan Vivo Z3X waxaa loo soo bandhigay qaab moodel ah oo aad loo heli karo oo ah bartanka dhexdiisa. Laakiin, nasiib daro, uma badna inay ku dhamaan doonto Yurub. In kasta oo aan rajaynayno inaan si dhakhso leh u ogaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Vivo Z3X: Nooca cusub ee bartamaha
Kirin 985 faahfaahinta koowaad ayaa shaaca ka qaaday
Maamuus 8A: Taleefanka cusub ee heer-gelitaanka sumadda